Archive du 20181119
Taratasin’I Jean Maka aina tsara aloha !
K’aiza ry Jean a ! Aza mikoropaka intsony ianao fa tsy misy hevitra io e ! Tsy maintsy hiatrika tsotsorimamba isika mitsamy. Izay vokatra lazain’ny eny Ambohidahy ny fahagagana raha hoe misy nahazo ny amboara sahady ny iray amintsika.
Moto nidona tamina fiara Olona 2 naratra mafy teny Ampandrana
Nisehoana lozam-pifamoivoizana teo Bel'Air Ampandrana omaly tolakandro teo.
Anio alatsinainy 19 novambra no hiditra an-tsekoly amin’ny fomba ofisialy ny mpianatra amin’ny sekolim-panjakana eto Madagasikara. Mizara fe-potoana 5 ny taom-pianarana ary hifarana ny 19 novambra 2018.
Hatreto aloha izany dia tsy mahaverim-bola miaraka amin’ireo kandida hafa rehetra tsy tafakatra fihodinana faharoa ihany koa ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianina.